शनिबार थप १०९ जनामा गरि जम्मा १८ हजार ४सय ८३ संक्रमित « Philco Mission
शनिबार थप १०९ जनामा गरि जम्मा १८ हजार ४सय ८३ संक्रमित
काठमाडौँ । आज शनिबार नेपालभरि १ सय ९ जना कोरोनाका नयाँ बिरामी थपिएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले जानकारी अनुसार बाराको परवानीपुर गाउँपालिका–८ स्थायी घर भएकी १७ वर्षिया किशोरीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो।
बुधबार स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि विरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएकी ती किशोरीको आरडिटी पोजेटिभ देखिएको थियो। त्यस लगत्तै उनलाई कोभिड अस्पताल रिफर गरिएको थियो। ८ गते स्वाब संकलन गरिएकोमा ९ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो।
किशोरीमा अक्सिजनको मात्रा कम हुनुका साथै पाखाला लाग्ने, जिउ काँप्ने र स्वासप्रश्वासमा समेत समस्या देखिएको प्रवक्ता डा. गौतमले बताउए ।
यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४५ पुगेको छ। शनिबार देशभरीका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा ५ हजार ३ सय ८५ जना कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा १ सय ४५, प्रदेश नम्बर २ मा १ हजार ९ सय ९ र बागमती प्रदेशमा ४ सय ३४ जना संक्रमित अहिले उपचाररत रहेका छन्।
यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १८ हजार ४ सय ८३ पुगेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ३ सय १३, प्रदेश नम्बर ५ मा ३ सय ४६, कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ३८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ९ सय जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ६ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म डिस्चार्ज भएर घर फर्किनेको संख्या १३ हजार ५३ रहेको छ। देशभर १८ हजार १ सय ८३ जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ ।